ခရီးသွားခွင့်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ e-Government မှတစ်ဆင့်ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်ရရှိထားပါသလား။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီခရီးသွားခွင့်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ e-Government မှတစ်ဆင့်ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်ရရှိထားပါသလား။
30 / 03 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ခရီးသွားခွင့်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ E-Government မှတစ်ဆင့်ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိပါသလား။ ခရီးသွားလာခွင့်လက်မှတ်ရယူရန်လိုအပ်ချက်များ။ ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်ကိုမည်သူရနိုင်သနည်း။
သမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ကမြို့ပြခရီးသွားလာခွင့်လက်မှတ်များနှင့် ပတ်သက်၍“ အပြန်အလှန်သွားလာမှုခရီးသွားများသည်အစိုးရ ၀ န်ကြီးများ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုခံယူရသည်” ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိစာနယ်ဇင်းများအရ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှသင့်တော်သည်ဟုယူဆသောအခြေအနေများရှိသည့်နိုင်ငံသားများ မှလွဲ၍ မြို့ပြဘတ်စ်ကားစီးခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဆိုးရွားသောဖျားနာမှုကြောင့်ဆိုးရွားသောဖျားနာမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသောနိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်ရန်နေရာမရှိသောနိုင်ငံသားများသည်အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သော ၁၅ ရက်အတွင်းတွင်ခရီးသွားလာခွင့်ပါမစ်ရရန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသို့မဟုတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ထို့အပြင်သက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသင်းမှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းအတည်ပြုသူနှင့်အကြီးတန်းပြည်သူ့အရာရှိများနှင့်ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည်ခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။
မြို့ကြီးများအကြားခရီးသွားလာရန်တာဝန်ရှိသည့်နိုင်ငံသားများသည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ညှိနှိုင်းမှုအောက်တွင်တည်ထောင်မည်ဖြစ်သည့်ခရီးသွားခွင့်ပြုဘုတ်အဖွဲ့သို့လျှောက်ထားပြီးခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းကိုတောင်းခံလိမ့်မည်။ သင့်လျော်သည်ဟုယူဆသူများအနေဖြင့်ခရီးသွားလမ်းကြောင်းနှင့်ကြာချိန်အပါအ ၀ င်ဘတ်စ်ကားစီးနင်းခွင့်ပြုချက်စာရွက်စာတမ်းကိုဘုတ်အဖွဲ့မှထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဘတ်စ်ကားလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကိုခရီးသွားခွင့်ပြုဘုတ်အဖွဲ့မှပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလူများအားအသိပေးလိမ့်မည်။
ခရီးသွားခွင့်ပြုဘုတ်အဖွဲ့သည်ဘတ်စ်ကားဖြင့်ခရီးသွားမည့်နိုင်ငံသားများ၏စာရင်း၊ သူတို့၏ဖုန်းများနှင့်ခရီးသွားစာရင်းများကို၎င်းတို့ ဦး တည်ရာတွင်ဖော်ပြထားသောခရီးသွားစာရင်းများကိုမြို့တော်ဝန်သို့စာရင်းပေးလိမ့်မည်။ ခရီးသွားခွင့်ပြုထားသောဘတ်စ်ကားများသည်မြို့ပြဘတ်စ်ကားဂိတ်တွင်သာခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ၌ရပ်နိုင်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပါက၎င်းတို့ရပ်တန့်သည့်ပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှခရီးသွားခွင့်ရှိသောခရီးသည်များကိုခေါ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီများ၏လွန်းသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည်။
သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်ဒီဂျစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရုံးသည်ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်ကို e-Government မှယခု မှစ၍ ရယူနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ သူ၏တွစ်တာအကောင့်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ“ coronavirus အတိုင်းအတာအတွင်းခရီးသွားမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများသည်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံသွားရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ခရီးသွားခွင့်လျှောက်လွှာများသည် e-Government ပေါ်တယ်။
e-Government Gateway မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားပါ
သင်၏လျှောက်လွှာကို Travel Permit Board သို့ပေးပို့ပြီးဘုတ်အဖွဲ့မှအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
ခရီးသွားခွင့်ပြုဘုတ်အဖွဲ့မှပြုလုပ်သောအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်လျှောက်လွှာတင်သူများအား“ သင်၏လျှောက်လွှာကိုလက်ခံပြီးဖြစ်သည်” (သို့) သင်၏လျှောက်လွှာကိုပယ်ချထားသည့်အတွက်လျှောက်ထားသူများကို SMS မှအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာများကိုလက်ခံသောနိုင်ငံသားများသည်၎င်းတို့၏ TR ID နံပါတ်နှင့်အတည်ပြုပြီးသည့်နောက်တွင်ဘတ်စ်ကားဂိတ်များသို့မဟုတ်လေဆိပ်များ၌ပြုလုပ်သောလျှောက်လွှာခုံများ၌လက်ခံလိမ့်မည်။
ခရီးသွားခွင့်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ e-Government ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်
e-Devlet`T မှ src စာရွက်စာတမ်း
İzmirim Card ကိုဘယျလို, Buy Install လုပ်နည်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘယ်လိုနေသလဲ?
ePttAVM စတိုးဆိုတာဘာလဲ။ ePttAVM မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ePttAVM စတိုးကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။
Zigana Ski စင်တာဘယ်မှာလဲ။ ဘယ်လိုရယူရမလဲ ဘယ်လိုစျေးနှုန်းများနှင့်နေရာထိုင်ခင်းအခွင့်အလမ်းတွေရှိပါသလဲ
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က ဝယ်ယူ Make မှ Teo ထွက်ဝန်ထမ်းများ!
Pamukova အတွက်မီးရထားမတော်တဆမှု Gone ဒါပေမယ့်တစ်နှစ် 15 အင်ဖို၏သင်တန်းကျော်
နှစ်တွေ 13 Pamukova ရထားဘေးအန္တရာယ်နှောင်းပိုင်းကပဲ!
အဆိုပါဓါတ်ရထားခဲ့ငယ်ရွယ်များပြားမှတဆင့် Samsun ဝါယာကြိုးကွက်ခုန်
Konya, တစ်ကမ္ဘာလုံး Mersin ချိတ်ဆက်ဖို့
ဥရောပနှင့်အတူ Çerkezköy ကုန်သွယ်ရေးကျော်